Firenena - Vaovao momba ny dia | Vaovao momba ny dia (Pejy 2)
Nihantona ara-potoana ireo tanàna antonony tany Frantsa
Ireo tanàna medieval mahatalanjona indrindra dia hita any Frantsa. Spaces izay toa nijanona ara-potoana, miaraka amin'ny tantara maro ho hita.
Woolacombe Beach, morontsiraka UK
Woolacombe Beach dia torapasika miorina ao Royaume-Uni, misy fanitarana lehibe sy misy saina manga, hankafizanao rivo-piainana tsara.
Ny zotra NC500 mamaky an'i Ekosy
Ny Route 66 malaza izay mamakivaky an'i Etazonia manomboka amin'ny morontsiraka ka hatrany amorontsiraka dia manana ny kopian'izany any Ekosy: làlambe mahafinaritra ...
Ny Jurassic Coast, toerana nakana sary ny andian-tsarimihetsika Broadchurch
Ny andian-tsarimihetsika Broadchurch dia notifirina teny amin'ny antsoina hoe Coast Jurassic, distrikan'i Dorset, atsimon'i Angletera.
Shell Beach, ny morontsiraka any Guyana izay atodin'ireo sokatra
Shell Beach any Guyana no toerana anaonan'ny sokatra an-dranomasina isan-taona
Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra hahitana an'i Birmingham dia amin'ny alàlan'ny dia an-tsambo amin'ny alàlan'ny lakandrano taloha. Ary ny afovoan-tanàna manan-tantara amin'ity tanàna anglisy ity dia niampitan'ny renirano an-jatony maro izay tamin'ny fotoana hafa dia nitana andraikitra lehibe ho làlam-pitaterana ho an'ny fitaovana mavesatra tamin'ny fotoanan'ny Revolisiona Indostrialy, rehefa nifandray tamin'ny sisa tamin'ny Andrefana ny tanàna. Midlands.
West Highland Line, lamasinina tsara tarehy any Ekosy
Raha te hahita sy hankafy ny tsara indrindra any Ekosy ianao mandritra ny dia lavitra, dia aza misalasala mividy ny tapakilanao hiakaranao amin'ireo kalesin'ny West Highland Line, izay manolotra dia mahafinaritra eo anelanelan'ny Fort William sy Mallaig, eo afovoan'ny Lands Avo.
Shell Grotto, lava-bato anglisy tsy fantatra mifono mistery
Ao amin'ny manodidina ny tanàna anglisy any Margate, any amin'ny fanjakan'i Kent, dia misy lava-bato miafina voaravaka amoron-dranomasina mihoatra ny 4 tapitrisa. Ny anarany dia The Shell Grotto ary manintona mpizahatany voasaron'ny enigma izy io: tsy misy mahalala hoe iza no nanamboatra azy, na oviana, na tamin'ny antony inona.
Trano Chatsworth: lapan'ny firenena lehibe any ambanivohitra anglisy
Ao amin'ny faritanin'i Derbyshire dia iray amin'ireo trano manan-tantara lehibe indrindra any Angletera: ny Chatsworth House.
Fomban-drazana sy kolotsaina Myanmar
sary indramina: Kee-yuen Ny fahasamihafan'ny olona mandrafitra an'i Myanmar dia midadasika be ka nolazaina fa misy vondrona…